musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Spain neSaudi Arabia Ona Nzira Yekutungamira yeUNWTO
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Kufona kwekutanga kwaive pakati peCrown Prince weSaudi Arabia neMutungamiriri weSpain.
Yechipiri kufona yaive neUNWTO Secretary General.
Kudanwa kwechitatu pakati peSpanish neSaudi Gurukota rezveKushanya nhasi kwakakonzera kuti MOU isainwe mwedzi uno muRiyadh ichiisa chisimbiso ramangwana reUNWTO.
Icho chinangwa cheHurumende yeSaudi Arabia yekumanikidza fora relocation yeWorld Tourism Organisation (UNWTO) kubva kuMadrid kuenda kuRiadh kwakaiswa pamberi pevhiki ino.
Prime Minister weSpain, Saudi Crown Prince, uye Secretary General weUN vakapinda mukudzivirira chikumbiro chakadai.
Nhasi HE Ahmed Al Khateeb Mutungamiri of ushanyi of Saudi Arabiaa vakaita hurukuro ne Gurukota reSpanish reKushanya, HE Reyes Maroto.
Sekureva kweTN zvinyorwa, musangano chaiwo pakati pemakurukota maviri ezvekushanya kubva kuSaudi Arabia neSpain neChishanu wakafamba zvakanaka.
Chinzvimbo cheSaudi Arabia chaigara chiri cheUNWTO kutamba chinzvimbo chakakurumbira uye chinoshanda kutsigira nyika dzichiri kusimukira. Saudi Arabia iri kutsvaga rutsigiro rwakawanda rwe UNWTO neSpain, nyika inogamuchirwa yeUN-yakabatana agency.
Masosi eTN akazivisawo kuti kuchave nechibvumirano chakabatana angangotanga kutanga svondo rinouya, pamwe negurukota reSpain vangangoenda kuRiyadh kunosaina MOU mwedzi uno.
Iyi nhanho yakakosha uye inogona kungoonekwa sekubudirira kwezviitwa negurukota reSaudi Arabia, uyo akange aonekwa achifamba pasi rese, achienda kune ese matunhu eUNWTO zviitiko kutenderera pasirese, uye mamwe matanho akakosha.
Gurukota rakakwanisa kuve rinonyanya kukosha Tourism Tourism munyika, nyika yake yakagadzirira kushandisa mabhiriyoni emadhora kubatsira indasitiri yekushanya yepasirese. Saudi Arabia yakatarisira kutarisa nyika zhinji munyika dzichiri kusimukira kuti dzibatsire kubata indasitiri yezvekushanya mune dzakadai hupfumi hunotungamira kuburikidza nedenda.
Panguva imwecheteyo, UNWTO yakaonekwa seisingashande zvakanyanya pasi pevasina kusimba uye vamwe vanoti hutungamiriri hwakapesana. Kusarudzwa kwaSecretary General wazvino kwakange kwaonekwa nemaSecretary maGeneral mairi apfuura sekukanganisa uye zvisina basa.